» आजको दिनमा राजनीतिप्रति कुनै आकर्षण देखिदैन
११ पुष २०७७, शनिबार ०८:२७
युवाको राजनिती यात्रा किन ओझेलमा ?? आजको दिनमा युवा बर्गमा राजनीतिप्रति कुनै आकर्षण देखिदैन ।
दल अनुसार युवा विद्यार्थी संगठन त छन्, तर ति केवल औपचारिकतामा आधारित मात्र छन् । कुनै पनि दलका युवा संगठनले विचार, सिद्धान्त र दर्शनको विचार प्रवाह गरेका छैनन् ।
अधिकांश कम्युनिस्ट र कांग्रेसका वा अन्य युवा विद्यार्थी नेताहरुको बीचमा तिनको संगठनको नाम फरक बाहेक तिनका आचार, व्यवहार, शैली र इमान्दारितामा कुनै फरक देखिन छाडेको छ ।
अवसर, पद र सेवा सुविधा प्राप्तको लागि वार्गेनिङ टुल्सको काम बाहेक युवा विद्यार्थी संगठनहरु विचार सुन्य भिडको रुपमा मात्र क्रियाशील देखिएका हुन्छन् । निर्वाचनको बखतमा यदा–कदा देखिने सक्रियता पनि स्वार्थमा आधारित देखिन्छ ।
आज दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको कुनै पनि नेताले आफ्ना छोरा–छोरीलाई राजनीतिमा ल्याउन चाहँदैनन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य पार्टीका केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेतामध्ये कति प्रतिशतका छोरा–छोरी राजनीतिमा सक्रिय होलान ? यो आफैंमा अनुसन्धानको विषय हो । तर, मलाई लाग्छ त्यो संख्या १० प्रतिशत पनि छैन ।
यसलाई अर्को भाषामा भनौ जुन ९० प्रतिशत नेताका छोरा–छोरी राजनीतिबाट भाग्न चाहन्छन् वा भगाइन्छ भने अबको २० वर्ष पछिको राजनीतिको परिदृश्य कस्तो होला ? मलाई लाग्छ राजनीतिमा युवा वर्गको आकर्षण बढाउन सकिएन भने अबको राजनीति उद्योगी, व्यापारी, ठेकदार, सिनेकलाकार, गायक र दलालहरुको हातमा जाने स्वतः सिद्ध छ ।
यो डर लाग्दो परिदृश्यप्रति आज केहि युवा बाहेक कसैलाई पनि कुनै चिन्ता र चासो छैन । आजका युवा पुस्ताको बुझाई राजनीति भनेको जागिर खान, ठेक्का पाउन, व्यापार वृद्धि गर्न, शक्तिको अभ्यास गर्न, घर बनाउन, सम्पत्ति कमाउन र गाडि किन्न प्रयोग गरिने हतियार मात्र हो । त्यो भन्दा डरलाग्दो अर्को प्रवृत्ति पनि राजनीतिमा देखिएको छ ।
पद, अवसर र सुविधा प्राप्तीको खातिर आफ्नो विवेक बन्दक राख्ने वा आलोचनात्मक चेतको अवसान गराएको प्रमाण धेरै छन् । आफ्नो दल वा गुटका कुनै नेताले जस्तोसुकै गल्ती वा कमजोरी गरे पनि सहेर बस्ने र सर्मथन गर्ने प्रबृत्ति हाबी छ।
यो प्रवृत्तिले कार्यकर्ताहरु दास र नेताहरु मालिकजस्ता भएका छन् । जसले आलोचना गर्छ उसको राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्ने भएपछि या त उ दास वन्छ या त राजनीतिबाट पलायन हुन्छ ।
राजनीतिमा देखिएको यो प्रवृत्तिले पनि राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जतिबेला युवाहरु राजनीतिमा आकर्षित थिए, त्यसबखत हरेक कमिटीको बैठकको पहिलो एजेण्डा आफ्नो आलोचना आफैंले गर्ने वा आत्माआलोचना गर्ने र अरुको कमिकमजोरीको आलोचना गर्ने हुन्थ्यो । यो प्रक्रिया र पद्धतिबाट राजनीतिमा शुद्धीकरणको गुन्जायस रहन्थ्यो र अशल, अगुणवत्ता व्यक्ति मात्र राजनीतिमा टिकेको थियो ।
आज राजनीतिका यी सबै ऊर्जावान र सिर्जनशील विषयहरुलाई विचारविहीन भीड र गुट केन्द्रित गतिविधिले छायाँमा पारेको छ । आफ्नो गुटबाट आएका जुनसुकै निर्णय वा विचारहरु बिना बहस हु–बहू लागू गरिन्छ र अर्को गुटका जुनसुकै असल र नीतिगत निर्णयहरुलाई बलपूर्वक इन्कार गरिन्छ ।
यस्तो घिनलाग्दो परिदृश्यमा स्वाभिमानी र क्षमतावान युवाहरु राजनीतिमा आकर्षित नहुनु विल्कुल स्वभाविक हो । राजनीति आफैंमा घिन लाग्दो र आकर्षणबिहीन विषय हुँदै होइन । राजनीतिबिना आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना नै गर्न सँकिदैन । तर, आज राजनीतिलाई आकर्षणबिहीन विषयको रुपमा स्थापित गरेर हाम्रा भावि सन्ततिको योग्यता, क्षमता र भविष्यको मात्र होइन जनपक्षीय राजनीतिको भ्रुण नै हत्या गर्न हामी तल्लिन भएका छौं ।
राजनीतिलाई निष्ठा, इमान्दारिता र मुल्य र मान्यतामा आधारित मार्गमा पुर्नर्स्थापित गर्न राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई विशेष एजेण्डा बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
राजनीति भनेको न त दास उत्पादन गर्ने कारखाना नै हो, न त अन्धभक्तहरुको झुण्ड नै हो । यो त आलोचनात्मक चेत भएका अशल नागरिकहरुको युग परिवर्तनको साधन हो । राजनीतिलाई यही रुपमा बुझ्न र बुझाउन ढिला भइसकेको छ ।